နေအိမ် » ပြိုင်ပွဲ » Sonic ATV Trip 2
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Sonic ATV Trip 2
ဖေါ်ပြချက်: သင့်ရဲ့ ATV ဖမ်းပြီး Sonic အ Arcade သူရဲကောင်းနှင့်အတူမြန်သင်တတ်နိုင်သလောက်စီး။ သင်တို့ရှိသမျှသည် 8 အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ကြလိမ့်မည်နည်း
ကစား: 59,251 tag ကို: Sonic ဂိမ်း, Sonic, atv
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, မော်ဒကဲသည်, ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်တစ်ဦး ATV မောင်းထုတ်သူ့ကိုအားလုံးအဆင့်ဆင့်လွန်နှင့်မြင့်မားရမှတ်ရကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
မော်ဒကဲသည်ခုန်ဖို့, ရွှေ့ဖို့ Space Bar ကိုမြှား key ကိုသုံးခြင်းဖြင့်လမ်းအပေါ်အတားအဆီးများရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်း, လမ်းအပေါ်ဟမ်ဘာဂါမှ moto စီးကိုကူညီပါ။
တစ်ဦးအဆုံးစွန်ပြိုင်ကားဂိမ်း, ယခုစီးနောက်ဆုံးပေါ် ATV နှင့်အတူအားလုံးမြို့ပြပုဒ်စီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွဆယ်တဒင်္ဂါးပြား levels.Collect နှင့်သင့် ATV crashing မရှိဘဲ finish ကိုရောက်ရှိပြီးအောင်တက်ဖြစ်ပါတယ်။
သဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့ ATV မောင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌အဆင့်အပြီးသတ်အမြင့်မားရမှတ်လုပ်ရှိသမျှကိုတ္ထုကိုဖကျြဆီး။
scoobydoo စူပါ ATV
Dora ATV Challenge. Dora adventure in ATV, help Dora pass all levels in this game.
SpongeBob ATV ပြေးပြိုင်ပွဲ
SpongeBob အသစ်တစ်ခုစီးနင်းအပေါ်သူလည်းမိမိ ATV အာဏာအပြည့်အဝနဲ့ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အောက်ခြေမှာကျောက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျသူ့ကိုကူညီခြင်းနှင့်သင်တိုင်းအဆင့်ကိုဖြည့်စွက်နိုင်လျှင်မြင်နိုင်ပါသည်
doraemon ဟယ်လို ATV
Doraemon drive ကို ATV အဟယ်လိုညဉ့်၌ကိတ်မုန့်ကိုစုဆောင်းကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု.
ဒီကယ့်ကိုအေးမြ ATV တန့်စက်ဘီးဂိမ်းခုနှစ်တွင်ကနေဒါအနေအထားဖြတ်ပြီးပြေးပြိုင်ပွဲ, ရဲလှည့်ကွက်များနှင့် position နဲ့ဆက်ဆံ၏တန်ချိန်ပယ်ဆွဲထုတ်အ ATV ဆိုင်အသစ်စက်ဘီးနဲ့ဝတ်စုံအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်တို့လည်း achivements ရိုက်နှက်နိုင်လျှင်မြင်ရ! ဆိုင်ကယ်စီးရန်သင့် ARROW keys ကိုသုံးပါ,
သငျသညျတဖန်ကျော်တင်ရန်ခံရမှစောင့်ရှောက်အဖြစ်တောင်ကုန်းမြေပြင်အနေအထားကျော်ကသင်၏ ATV စီး။
2 ATV hulk
တောင်ကုန်း INA မြို့အပေါ်မှာနှငျ့သငျကျော် Tipping မပါဘဲမျှမျှတတနေဖို့ဖို့ကြိုးစားအဖြစ် ATV အပေါ်ရှိသွားပြီနှင့်အတူစီး။
သင်တစ်ဦးသည်အလွန်ကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်အနေအထားပေါ်တွင်သင်၏ ATV မောင်းထုတ်ရန်ရှိသည်။ အဆိုပါလမ်း, ကျောက်အပြည့်အဝနဲ့သငျသညျအပြည့်အဝမြန်နှုန်း you`ll လှန်မှာသူတို့ကိုထိလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဓာတ်လှေကားတွေအများကြီးနှင့်သူတို့အပျေါမှာဆက်နေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တပ်လှန့်နေပါ။ မြန် yo အဖြစ် finish ကိုရောက်ရှိရန်ကြိုးစားပါ